Osimiri Naịl: njirimara, ndị na -achị ya, mkpa ya, ahịhịa na anụmanụ | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 05/08/2021 10:00 | Ciencia
El Osimiri Naịl Ọ bụ osimiri mba ụwa, ihe karịrị kilomita 6000 n'ogologo, nke gafere mba iri na mpaghara Afrịka. Ọ bụ ezie na ọ dịla anya a na -ele ya anya dị ka osimiri kachasị ogologo n'ụwa, ọ nọ ugbu a n'ọkwa nke abụọ, nke Amazon karịrị ya mgbe ọ kọwasịrị mmalite ya. Ọ bụụrụ ndị bi na ndagwurugwu ya isi mmalite ndụ mgbe niile, na -enye ọmụmụ nke ọma ma na -enye mmepe mmepe obodo Ijipt oge ochie. Ọ na -emetụtakwa akụ na ụba, ọdịbendị, njem na ndụ kwa ụbọchị na mpaghara Afrịka.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị gbasara njiri mara, ahịhịa, anụ na mkpa niile nke Osimiri Naịl.
2 Egwu na isi iyi Osimiri Naịl
3 Ndị na -asọpụrụ Osimiri Naịl
Osimiri Naịl bụ osimiri nke abụọ kachasị ogologo n'ụwa, yana ogologo ya ruru kilomita 6.853. Ụzọ ya nke dị n'ebe ugwu-ndịda na-agafe mba Afrịka iri. O nwere nnukwu efere nke ihe dị ka square kilomita 10, nke nwere ntakịrị karịa 3,4% nke mpaghara ala Africa. Ogologo ya kacha bụ kilomita 2,8. Ebe ọ bụ na ọtụtụ mpaghara osimiri Naịl na -esi esi esi esi aga agaala kpọrọ nkụ, ọ dịkwa obere mmiri ozuzo. Osimiri a aghọọla osimiri ama ama. Nke a pụtara na mmiri mmiri ya na -esite na mmiri ebe ihu igwe dị mma maka mmiri ozuzo.
Usoro osimiri ya nwere osimiri abụọ, Osimiri Naịl White na -anọchite anya 80% n'ime ha na Osimiri Naịl Blue na -anọchite anya 20% nke oge udu mmiri. Ndagwurugwu Naịl bụ otu n'ime ndagwurugwu osimiri kacha eme nri na ndị bi na mpaghara a nwere ike ịkọ ugbo.
Enweela ọtụtụ agbụrụ na -ebi n'ụsọ mmiri ya kemgbe ụwa, dị ka siruk, nuer na sufis. N'ihi nkwenkwe ha dị iche iche (ndị Alakụba, ndị otu Ọtọdọks, ndị Juu, ọdịnala ndị Copt, na okpukpe ndị ọzọ), ha biri oge udo na agha.
Osimiri Naịl na -agbagọ agbagọ, na -agbada n'akụkụ ụfọdụ ma na -agbasa ebe ndị ọzọ. Ị nwere ike izute nsụda mmiri n'okporo ụzọ, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịnyagharị n'akụkụ dị iche iche, ọ na -esiri ike ịnyagharị n'ihi enweghị ike na akụkụ ndị ọzọ.
Ewezuga ụcha nzuzu nke enwere ike ịhụ n'okporo ụzọ White Nile, Mmiri Nile na -achakarị acha anụnụ anụnụ, dị nnọọ iche na odo odo nke ọzara na akwụkwọ nkwụ. Osimiri ahụ mepụtara obere agwaetiti, ụfọdụ n'ime ha bụ ebe nlegharị anya.
Egwu na isi iyi Osimiri Naịl
Isi ihe iyi egwu nke osimiri nke abụọ kachasị ogologo n'ụwa bụ mmetọ ọ na -enwe, n'ihi na agbanyeghị mbọ ịmebe iwu ga -amachi mkpofu mmiri n'ime mmiri ya, ụlọ ọrụ na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na -anọgide na -enwe nleghara anya dị otú ahụ.
N'otu aka ahụ, mmịpụta na -abawanye site na Osimiri Naịl na -eme ka usoro mmetọ a dị ngwa, ọ bụghị naanị na -etinye ụmụ mmadụ dabere na mmiri ya ịdị ndụ, kamakwa ọ na -etinye ihe dị ndụ dị ndụ nke dị n'Osimiri Naịl na gburugburu ya.
Ọmụmụ ya abụrụla isiokwu na -esekarị okwu, n'ihi na n'agbanyeghị na ụfọdụ ndị na -eme nchọpụta, dị ka Burkhart Waldecker si Germany, na -ekwu na Naịl mụrụ na Osimiri Kagera, ndị ọzọ kwenyere na ọ malitere n'Ọdọ Mmiri Victoria. Na narị afọ nke abụọ AD C. Ekwenyere na ọ malitere na glacier Rovenzori.
Ndị na -asọpụrụ Osimiri Naịl
Enweghi nkwekọrịta na isi iyi Osimiri Naịl, n'ihi na n'agbanyeghị na Ọdọ Mmiri Victoria buru ibu, osimiri ndị ọzọ dị ka Osimiri Kagera dị na ọdịda anyanwụ Tanzania na -enye ya. N'aka nke ya, nke a na -ewetakwa ya, Osimiri Rukarara (Rukarara), nke akpọrọ aha ya ka ọ na -asọba na Kagera.
Ebe ọzọ Osimiri Naịl nke dịpụrụ adịpụ bụ Osimiri Luvyironza, nke na -asọba na Osimiri Ruvubu wee jikọta ya na Osimiri Kagera, wee banye n'ime Ọdọ Victoria. Nke a bụ isi mmalite ama ama ma bụrụkwa otu n'ime isi mmalite kacha ukwuu na ndịda Osimiri Naịl. N'oge a, akụkụ etiti nke Naịl ma ọ bụ akụkụ etiti nke Naịl na -amalite, ụzọ si Khartoum gaa Aswan, na ngụkọta ogologo ya ihe dịka kilomita 1.800.
N'ikpeazụ, Osimiri Naịl na -asọba n'oké Osimiri Mediterenian site na ndị na -asọba ya, na -etolite Osimiri Naịl Delta, nke bụ otu n'ime oke mmiri kachasị ukwuu n'ụwa. Ọ bụ mpaghara buru ibu ma na -eme nri nke ugwu Egypt, nke a na -akpọbu Lower Egypt, nke nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ dị elu ma dabara maka mmepe ugbo. Ị nwere ike ịhụ maapụ ọnụ Osimiri Naịl n'okpuru.
Osimiri Naịl na -emetụtakarị Egypt na obodo ya, mana ọ na -agafe na mba iri na Afrịka na mkpokọta: Burundi, Tanzania, Rwanda, Uganda, Kenya, South Sudan, Sudan, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, na Egypt n'onwe ya.
Ọ bụ ezie na ihu igwe nke Osimiri Naịl dị naanị mita ole na ole site n'ọzara, mmiri ya na -eme nri na -enye ohere ka ahịhịa dị nso na -amụba, ọ bụghị naanị maka ebumnuche ugbo, kamakwa Ndepụta ya kacha ibu bụ osisi papaịrọs, ọ bụ ya mere ejiri ya mee ihe tupu achọta akwụkwọ.
Na mgbakwunye, mpaghara a ma ama maka oke ahịhịa na ụdị osisi dị ogologo dịka ahịhịa na achara. Ụdị osisi achọtara na ụzọ ahụ gụnyere spin Hasab, ebony, na praacie acacia, nke nwere ike iru mita 14 n'ịdị elu.
Naịl emeela ka ihe dị iche iche dị ndụ dị ndụ wee mee ka ọnọdụ ibi ndụ dị elu nwee ike. Anụmanụ na -agụnye hipo, enyí, giraffes, okapi, buffalo, na agụ owuru.
Achọpụtala ụdị anụmanụ dị ka heron isi awọ, gulls, nnukwu cormorant na ngaji nkịtị n'ime anụ ọkụkọ. N'ime ihe na -akpụ akpụ, ihe nleba anya Naịl, nke abụọ kacha nwee agụ iyi Naịl n'ụwa, a na -ahụkwa mbe mbe kachasị ewu ewu. Osimiri Naịl nwere ihe dị ka ụdị azụ iri na abụọ na iri abụọ na iteghete, iri abụọ na isii n'ime ha na -adịkarị, nke pụtara na ọ bụ naanị azụ ndị a na -ebi n'ime ya.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara Osimiri Naịl na njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Osimiri Naịl